Qorshaha Real Madrid Ee Siddeeda Ciyaartoy Ee Amaahda Kaga
Zinedine Zidane waxay diiraddiisu saaran tahay kulanka Champions League ee Manchester City ay toddobaadka dambe ugu tegi doonaan Etihad Stadium, walina kama fikirin dhinaca suuqa iyo waxa laga yeelayo ciyaartoyda amaahda ku maqan.
Real Madrid ayaa si adag iskugu diyaarinaysa kulanka City oo lugtii hore ee garoonkooda Santiago Bernabeu lagaga adkaaday 2-1, laakiin markay ciyaartaasi soo dhamaato, waxa tababare Zidane iyo kooxdu ay si fiican u qorshayn doonaan qaabka ay ku waajahayaan xili ciyaareedka dambe.
Inta aanay kooxdu u dhaqaaqin ciyaartoyda ay lasoo saxeexanayaan, waxay fiirin doonaan laacibiinta amaahda kaga maqan, kuwooda ay dib u soo celinayaan iyo xiddigaha fursad loo siinayo inay xili ciyaareed kale kusii sugnaadaan naadiyada ay waqtigan ku maqan yihiin.
Achraf Hakimi, Javi Sanchez iyo Jorge de Frutos ayay mar horeba Real Madrid ka kala iibisay kooxaha Inter, Valladolid iyo Levante, waxaanay ka heshay lacag dhan 48 milyan oo Euro.
Saddexdan ciyaartoy oo ka mid ahaa liiska xiddigaha amaahda ku maqan, hadda hawshoodu way dhamaatay, waxaana laga arrinsan doonaa, go’aana laga gaadhi doonaa mustaqbalka siddeed ciyaartoy oo kale.
Martin Odegaard iyo Dani Ceballos waxay ka mid yihiin laacibiinta ugu khibradda badan ee amaahda kaga maqan Real Madrid, marka laga eego heerka qaan-gaadhnimo ee ay kubaddoodu gaadhsiisan tahay.
Odegaard waxa uu xili ciyaareed amaah ah oo uu wacdaro dhigay ku qaatay Real Sociedad, halka uu Ceballos qaybtii dambe ee xili ciyaareedka muhiim ka ahaa Arsenal.
Labadan ciyaartoyba waxay Real Madrid u qorshaysay in min hal sano oo kale lagu kordhiyo heshiisyadooda amaahda ah ee ay Sociedad iyo Arsenal ugu maqan yihiin.
Andriy Lunin wuxuu tegay Real Valladolid markii uu Keylor Navas tegay sannadkii hore kooxda PSG, sababtoo ah, waxay Los Blancos amaah kusoo qaadatay Alphonse Areola oo beddel u ahaa Thibaut Courtois.
Hadda waxa baxaya Areola waxaana goolhayaha labaad ee Real Madrid noqon doona Andriy Lunin.
Alvaro Odriozola, Jesus Vallejo iyo Sergio Reguilon oo amaah ku maqan way ku adkaan doontaa inay boosas ka helaan Real Madrid xili ciyaareedka soo socda.
Odriozola waxa uu kusoo laaban doonaa Real Madrid kaddib amaah uu qaybtii dambe ee xili ciyaareedkii 2019/20 ugu maqnaa Bayern Munich, waxaanu markan beddel suge u noqon doonaa Dani Carvajal.
Reguilon ayaa waqti qurux badan uu u ahaa sannadkii uu Sevilla amaahda kula joogay, laakiin dhibaatada haysata ayaa ah in difaaca bidix ee Real Madrid ay iska sugayaan Marcelo iyo Ferland Mendy, waxaanay Los Blancos ku fikiraysaa inay si xog ah u iibiso Reguilon ama in sannad kale lagu kordhiyo heshiiskiisa amaahda.
Vallejo oo kusoo fashilmay Wolves iyo Granada oo uu amaah u tegay, ayaa isagana ay kooxdu iibin doontaa.
Laacibka sharcigu u diiday inuu Bernabeu kusoo laabto
Takefusa Kubo waxa uu amaah ugu maqnaa Real Mallorca waxaanu ka mid ahaa ciyaartoyda ay indhuhu hayaan horyaalka LaLiga ee xili ciyaareedkii dhowaanta dhamaaday.
Dhibaato sharci ayaa arrintiisa hadhaysay, waxaanu sharciga waddanka Japan mamnuuc ka dhigayaa in qof u dhashay waddankaas uu laba baasaboor qaato, waxaanay taasi ku kallifaysaa Real Madrid in ka hor inta aanu kusoo laaban Santiago Bernabeu ay baasabooro u raadiyo saddexda AxadleTM ee loo ogol yahay ee aan haysanin baasaboorka UEFA.
Labada kooxood ee Sevilla iyo Granada ayaa doonaya inay ka faa’iidaystaan Takefusa Kubo, waxaanay ka dalbadeen Real Madrid in amaah sannad ah lagu siiyo.
Xiddigaha la iibinayo
Oscar Rodrgiuez ayay Real Madrid iibin doontaa xagaagan kaddib sagaal gool oo uu u dhaliyey Leganes oo uu amaah kula joogo, waxaana ku tartamaya Villarreal, Getafe, AC Milan iyo Sevilla.
Borja Mayoral oo siddeed gool u dhaliyey Levante ayaa isaguna ku jira liiska ciyaartoyda la iibinayo, haddii aanu Zidane go’aamin in lagu soo celiyo Bernabeu oo uu galo booska Luka Jovic haddii la iibiyo xagaagan.
Xagaagii hore ayay Los Blancos kasoo iibsatay Real Zaragoza, isla markiiba waxa amaah lagu siiyey isla kooxdii laga soo iibiyey, waxaana la filayaa in sannad kale uu sii joogo Zaragoza oo amaahdiisa la kordhiiyo.